जेठ २९, २०७६ | समीक्षा
नेपाली साहित्यिक आकाशमा हाइकु एक स्थापित नाम भइसकेको छ । हाइकु भनेको तिन हरफमा लेखिने जापानी कविताको शैली हो जुन पाँचरसातरपाँच अक्षरको परिधीमा रहेर लेखिन्छ । वि.स. २०१७ सालमा ४५ दिनको जापान वसाई सकेर फर्केपछि वि.स. २०१९ सालमा शंकर लामिछानेद्वारा सूर्योदय शिर्षकमा सृजित हाइकु वि.स. २०१९ को भदौ अङ्कको रुपरेखामा छापिएको थियो । यो नै नेपालको इतिहासमा पहिलो हाइकुको रुपमा स्थापित छ । यस पश्चात् हाइककुले विभिन्न परिस्थितीहरु पार गर्दै आजको यस सशक्त अवस्थामा आइपुगेको छ । वि.सं २०६० सालमा नेपाल निप्पन रिसर्च सेन्टर स्थापनाले नेपाली हाइकुलाई आधुनिकता तर्फ डोरायो भने वि.स. २०६२ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाण्डौंमा अन्तराष्ट्रिय नेपाली हाइकु महोत्सव २०६२ सम्पन्न भएको थियो ।
सोही बखत वि.सं. २०६२ सालमा “ट्राफिक जाम“ नामक हाइकु संग्रहबाट आफ्नो लेखन यात्रा शुरु गरेका श्रीराम श्रेष्ठले हाल सम्म आईपुग्दा बिविध विधाका एक दर्जन भन्दा बढी कृतिहरु प्रकाशन गरी सकेका छन् । यिनै हाइकुकार श्रीराम श्रेष्ठले हालै “आगोको लप्का“ हाइकु संग्रह बजारमा ल्याएका छन् । श्रेष्ठको हाइकु लेखन तर्फ दोश्रो कृतिका रुपमा आगोको लप्का बजारमा आएको छ । पत्रकारितालाई मुख्य पेशाका रुपमा र विभिन्न शिक्षण संस्था तथा सामाजिक संस्थामा आवद्द रहेका श्रेष्ठ हाइकु लेखनमा पनि अव्वल मानिन्छन् । विभिन्न पेशा र कार्यमा संलग्न व्यक्तित्वहरु समेत हाइकु लेखनमा आवद्द हुनुले नेपाली हाइकु क्षेत्र अझ परिष्कृत हुने मौका पाएको अनुभव गर्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रको संलग्नतासँगै अनुभवले तिखारिएका श्रीराम श्रेष्ठका हाइकुहरुमा प्रणय र प्रकृतिको भाव झल्केको पाईन्छ । उनका यिनै भावहरु हाइकुको माध्यमबाट ‘आगोको लप्का’ मा संग्रहित भएर आएका छन् । यसलाई नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानले बजारमा ल्याएको हो ।
यस पुस्तकको भूमिका अनुभवी र पाका व्यक्तित्व पुष्कर लोहनीले लेखेका छन् । “आगोको लप्का“ हाइकु संग्रहमा संग्रहित हाइजिन श्रेष्ठका हाइकुहरु अत्यन्तै उत्कृष्ट छन् साथै नियम र परिधी भित्र रहेर सृजित छन् । आफ्ना हाइकुहरूमा हाइकु संरचनाको मर्मलाई उनले आत्मसात् गरेका छन्, । संग्रहमा रहेका हाइकुहरूले प्रेम, यौवन, प्रकृति, मानवीय स्वाभाव र सामाजिक परिवेशको सजीव र सशक्त चित्रण गरेका छन्। जापानी हाइकुकारहरु समेतको सहभागितामा गत साल जापान मै हाइकु महोत्सव सम्पन्न भएको थियो भने वर्ल्ड हाइकु एशोसिएसनमा नेपालकै हाइकुकारको उपस्थिती भइसकेको अवस्थामा नेपाली हाइकु जगतले अझै ठुलो अवसर र चुनौती समेत सामना गर्दै कुशलतापूर्वक अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
“आगोको लप्का“ हाइकु संग्रहमा आगोको गरिमा अथाह रहेको र आगो अग्नि देवताको रुपमा रहेको हुँदा अग्निलाई श्रद्दा गर्दै यस पुस्तकको नाम राखिएको प्रसंगलाई हाइकुकारले उदृत गरेका छन् । आगोलाई उनले अग्नि देवताको रुपमा चित्रण गर्दै जीवन र समाधिलाई विम्वित गरेका छन् ।
सबै तिर छरिदा
यस पुस्तकमा उत्कृष्ट र सान्दर्भिक बिषयवस्तुहरु समाहित छन् । विभिन्न परिवेश र विविध बिषयमा हाइकुहरु सृजना गरिएको भएता पनि हाइकुकार श्रीकृष्णका हाइकुमा प्रेम र स्नेह प्रशस्तै मात्रामा भेट्न सकिन्छ ।
एक्लो बस्दाको क्षण
आगोको लप्का भित्र प्राकृतिक बिम्बहरु पनि प्रशस्तै समेटिएका छन् । ती बिम्बहरुले प्राकृतिक बिम्बको सहारामा स्नेह र ममतालाई ईंगित गरेका छन् ।
उज्यालो खोज्ने दाउ
हाइकु पुस्तकको नामाकरणसँग मिल्ने गरी आगोको ज्वाला सहितको कभरपेज डिजाईनले हाइकु संग्रहको नामलाई सार्थकता दिएको छ । मूल्य रु २०० कायम गरिएको यस संग्रहमा ५०० वटा हाइकुहरू समावेश छन् । “आगोको लप्का“ ले हाइकु जान्ने र बुझ्ने उत्सुकता भएका साहित्यिक पारखीहरुका लागि हाइकु लालित्यको अनुभूत गराउने गतिलो खुराक बन्नेछ ।
गर्मीमा परेको पानीको शीतलता आनन्दको पर्यायवाची हुन् । उधुम गर्मीमा आइसक्रिम खाएर ...